Shirkadaha Caymiska Xayawaanka ee ugu Fiican Kanada | Cusboonaysiinta 2022
Bogga ugu weyn Shirkadaha Caymiska Xayawaanka ee ugu Fiican Kanada | Cusboonaysiinta 2022
Marka laga reebo qoyska iyo saaxiibbada, wax kale oo ugu muhiimsan noloshaada oo mudan in la ilaaliyo waa xayawaankaaga. Haddii aad deggan tahay Kanada, waa jiraan shirkadaha caymiska taasi waxay kaa caawin kartaa inay ilaaliyaan xayawaankaaga caafimaad qaba iyo sidoo kale inay kaa ilaaliyaan kharashyada sii kordhaya ee daryeelka xayawaanka.
Si lagaaga caawiyo xulashada caymiska ugu fiican ee xayawaankaaga, waxaan baarnay shirkadaha caymiska xayawaanka ee ugu caansan oo bixiya qorshayaasha ugu fiican oo ku saleysan qiimaha, qiimeynta, adeegga macmiilka, iyo in ka badan. Akhri si aad u hesho xulashada saxda ah ee saaxiibkaaga ugu fiican.
Daryeelka xayawaanka marka ay xanuunsan yihiin ama u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah marka uu shilku dhaco waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah, waana sababtaas sababta loogu baahan yahay caymiska xayawaanka.
Dhab ahaantii, waxa caymiska xayawaanku sameeyo ayaa ah inuu kaa caawiyo ilaalinta dhaqaale ahaan haddii ay dhacdo kharashyada xoolaha ee lama filaanka ah. Bil kasta, waxaad siisaa caymis shirkadda caymiska beddelkeeda caymiska socda.
Dhacdooyinka uu xayawaankaagu ku xanuunsado ama dhaawac ku sii hayo, shirkadda caymisku waxay daryeeshaa biilka xoolaha oo dabooli kara qayb ahaan ama magdhaw buuxa iyadoo ku xiran qorshahaaga. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad bixiso sanad -dhimis ka hor inta aysan caymisku bilaabin inay daboosho kharashaadka.
Ku saabsan Caymiska Xayawaanka ee Kanada
Kanada gudaheeda, caymiska xayawaanku wuxuu caawiyaa daboolidda kharashaadka caafimaad ee la xiriira xayawaanka. Iyadoo aan loo eegin siyaasadda, qorshooyinka caymiska waa inay ku jiraan caymiska daboolida shilalka, jirrooyinka, baaritaanada ogaanshaha, isbitaal dhigista, daryeelka degdegga ah, dawooyinka la qoro, iyo qalliinka.
Qorshayaal badan ayaa sidoo kale bixiya caymiska caafimaadka guud ee daryeelka joogtada ah sida ikhtiyaar dheeraad ah, hababka sida baaritaannada iyo tallaalada.
Caymiska Xayawaanka ee ugu Fiican Kanada
Markay timaado caymiska xayawaanka ee Kanada, caymiska, qorshaha, lacagaha laga jaray, iyo lacag -bixinta ayaa ah qodobbada ugu waaweyn ee ka dhigaya dhowr shirkadood inay ka soocan yihiin kuwa kale.
Kani waa qaddar lagu daray biilkaaga ka hor intaan lagu siin oo had iyo jeer wuxuu ku saleysan yahay boqolkiiba biilka.
Tani waa inta jeer ee aad dalban karto macaashkaaga caymiska xayawaanka sannad kasta oo siyaasadda ah. Shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan lacag -bixinno dheef aan xad lahayn.
Ka goynta lacagta
Lacagta laga jari karo waa qaddar aad jeebka ka bixiso ka hor inta shirkadda caymisku bixin wax kharash ah.
Kani waa ficilka dib u bixinta qof lacag qaatay ama lumiyay. Shirkadaha caymiska xayawaanka dib ayaa loo soo celiyaa iyagoo ku salaynaya qiimaha dhabta ah, halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen xisaabinta adag iyo jadwalka la daboolay.
Hoos waxaa ku qoran liiska caymiska xayawaanka ugu fiican Kanada
Xayawaanka rabaayada ah annaga
#1. Caymiska Petplan
Kala goyn la’aan
Aasaas, Dhexe, Sare $ 5,000 $ 200 - $ 2,500 Illaa 90% Waa inuu ahaadaa ugu yaraan 6 toddobaad
Petplan waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska xayawaanka ugu fiican Kanada. Shirkaddu waxay jirtay in ka badan 40 sano, oo bixisay qorshayaal caymis caafimaad oo dhammaystiran oo loogu talagalay bisadaha iyo eeyaha.
Petplan waxay bixisaa ilaa 90% magdhow sannad kasta xaaladaha la daboolay, iyo sidoo kale daboolida daawaynta kale iyo daaweynta baxnaaninta.
Waxay leedahay muddo sugitaan 15 maalmood ah laga bilaabo taariikhda dhaqan galka ah ka hor inta aan la daboolin xayawaankaaga. Petplan waxay kaloo bixisaa adeeg macmiil oo cajiib ah 24/7, magdhawga dalabka degdegga ah, iyo qiimo dhimista iibsiyada onlaynka ah.
#2. Caymiska Trupanion
Aasaas, Dhexe, Sare Unlimited $ 700 Illaa 90% hoosta 14
Bixiyaha kale ee ugu sarreeya caymiska xayawaanka Kanada waa Trupanion. Shirkadan waxay ku faantaa u heellanaanta caawinta milkiilayaasha xayawaanka inay ilaaliyaan kharashaadka daaweynta xayawaanka. Waxay bixiyaan caymiska xoolaha eeyaha iyo bisadaha.
Trupanion wuxuu ka dhigayaa habka xulashada qorshaha caymiska caafimaadka ee xayawaanka rabaayadda ah iyadoo la siinayo ikhtiyaar aan xad lahayn oo caymis iyo 90% dib u bixinta dhammaan qorshayaasha.
Waxaa jira 30 maalmood oo sugitaan xanuun iyo shan maalmood oo sugitaan dhaawac ah. Durba shuruudihii jiray lama daboolin; kuwani waxaa lagu qeexay xaalado caddayntoodu ay jirtay 18 bilood gudahood marka la qoro siyaasadda, oo ay ku jirto soo noqnoqoshada dhaawacyada.
Intaa waxaa sii dheer, Trupanion wuxuu kaloo bixiyaa dheefta tooska ah ee xoolaha, kaas oo si toos ah u bixiya biilka halkii dib loogu celin lahaa.
#3. Xayawaanka rabaayadda ah ee nagu leh Caymiska
Shil + Xanuun Unlimited $ 700 Illaa 90% N / A
Caymiska Pets Plus Us wuxuu siiyaa caymis Shil, Xanuun, iyo Daryeelka Daryeelka Fayo -dhawrka xayawaanka. Siyaasadahaan waxaa si gooni ah loo siiyaa bisadaha iyo eyda oo leh saddex ikhtiyaar oo kala goyn ah iyo mid kasta oo la bixin karo.
Caymiska Pets Plus Us wuxuu la imanayaa jar-jaris ku saleysan da'da iyo ikhtiyaar si loo doorto qorshe shil-kaliya ah si qiimaha loo yareeyo. Milkiilayaasha xayawaanku waxay haystaan ​​ikhtiyaar ah inay beddelaan daboolidda, jar -jaryada, iyo dib -u -bixinta boqolkiiba qorshaha Shilka & Jirrada, laakiin ilaa xad xaddidan marka loo eego shirkadaha kale.
#4. Caymiska PetSecure
2 Ammaan ah
3 Ammaan ah
4 Ammaan ah Unlimited $ 2,500, $ 5,300, $ 10,400, aan xad lahayn Illaa 80% N / A
Laga bilaabo 1989, Petsecure waxay ka mid tahay bixiyeyaasha ugu fiican adeegyada caymiska xayawaanka ee Kanada. Shirkadani waxay bixisaa afar heer oo ah caymiska xayawaanka oo leh ilaa 80% magdhawga daaweynta iyo adeegyada caafimaadka xoolaha. Dalabyadan waaweyn ayaa ka dhigaya mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan milkiilayaasha xayawaanka.
Waxay ka kooban tahay 48 saacadood oo sugitaan ah si loo daboolo shilalka, 14 maalmood oo xanuun ah, iyo lix bilood daboolidda ilkaha.
#5. CAA caymiska xayawaanka
Is haysta, Dhexdhexaad ah, Raaxo leh Unlimited $ 2,000, $ 2,500, $ 4,500 Illaa 80% N / A
Ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo laga yaabo caymiska xayawaanka ugu jaban ee Kanada waa CAA. Shirkadu waxay bixisaa caymis jaban oo loogu talagalay shilalka, caymis la awoodi karo oo loogu talagalay dhammaan jirooyinka iyo shilalka, Caymiska ugu sarreeya shilalka, jirooyinka, iyo waxyaabaha dheeraadka ah ee muhiimka ah.
CAA waxay leedahay saddex qorshe oo leh heerar kala duwan oo caymis; Compact, Intermediate, iyo, Luxury. Si aad gacan uga geysato ilaalinta xayawaankaaga, waxaad dooran kartaa mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada caymiska xayawaanka ee gaarka ah ee CAA.
Waxaa lama huraan u ah milkiile kasta oo xayawaan ah inuu ogaado ikhtiyaaraadka ku xeeran caymiska xayawaanka oo uu u diyaargaroobo waqti hore oo ku filan haddii lama filaanku dhaco. Markaad fiirineyso ikhtiyaarrada, waa in diiradda la saaraa caymiska, qorshaha, lacagaha laga jaray, iyo magdhawga, iyo qodobo kale oo khuseeya. Adigoo adeegsanaya 4taan arrimood ee ugu waaweyn si aad u hesho heshiiska ugu fiican adiga iyo xayawaankaaga.
13 Shirkadaha ugu Fiican ee bixiya Caymiska Xayawaanka
21 Siyaabaha Sharciga ah ee Lacag looga Sameeyo Kanada dhexdeeda
15 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Guriga Kanada | Talooyin
Waa Maxay Sweatcoin & Sidee Sweatcoin Lacag U Samaysaa?
Waa maxay Qiimaynta Defaqto? Maxay Qiimaynta 5 Xiddigle Ku Leedahay Meheraddaada
Raadinta caymis ma aha oo kaliya cadaadis; way adag tahay. Iyada oo alaab maaliyadeed oo badan la heli karo, waxay…
Calanka Cagaaran Vs AA Vs RAC: Eeg Fadeexada Daboolida Jaban ee Jaban 2022
Ma ku dheggan tahay doorashada mid ka mid ah saddexda ciyaartoy ee ugu waaweyn suuqa jabinta - AA, RAC, iyo Calanka Cagaaran?…
Review Caymiska Caafimaadka Ambetter 2021| Faa'iidooyinka & Khasaaraha | Legit & Fadeexad
Hadafka dib u eegista Caymiska Caafimaadka Ambetter waa in la dhimo kharashka daryeelka caafimaadka. Caafimaadka Ambetter…
Dib u Eegista Caymiska Nolosha ee Cigna 2021 Iyo Sida ay U Shaqayso
Nasiibdarro aan la filayn oo khatar gelin karta nolosheena ama qaali karta qof aan jeclahay ayaa laga yaabaa inay ka dhacdo…
Ethos waa caymis nololeed oo ku siinaya siyaasado loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta maaliyadeed ee la xiriirta…